कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयल अस्थव्यस्थ, कर्मचारी आन्दोलित प्रशासनको वेबास्था – Click Khabar
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयल अस्थव्यस्थ, कर्मचारी आन्दोलित प्रशासनको वेबास्था
चितवनः अधिकांश जसो पदाधिकारी निमित्तको भरमा रहेको यहाँको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा सम्म खुल्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय पदाधिकारीको अभावमा अस्थव्यस्थ वन्दै गएको छ ।
सोही विश्वविद्यालयको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा अस्थाई र करार कर्मचारीहरु सहितले विश्वविद्यालयमा साउन १२ गते तालाबन्दी गरेका हुन । उनीहरुले केन्द्रीय कार्यालय संगै कृषि र भेटेनरी संकायमा पनि तालाबन्दी गरेका छन् । संगठनका अध्यक्ष अचल शाक्यले त्यहाँ कार्यरत २४ जना करार कर्मचारीलाई स्थायी र ८५ जना ज्यालादारी कर्मचारीलाई करार सहितका बिभिन्न माग राख्दै तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो ।
हाल उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाउनु भएकी डा. शारदा थपलियाले आफ्नो अधिकार वाहिर गएर अन्य सबै काम गरेको भए पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने बिषयमा अनुदार भएकै कारण तालाबन्दी गर्नु परेको शाक्यको भनाई छ । यता थपलियाले अहिले तत्काल उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकीने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपाल सरकारको निती नियमले उहाँहरुले भने जस्तो गरि माग सम्बोधन गर्न सकीदैन ।” आँफुले यस विषयमा बार्ताका लागि अनुसन्धान निर्देशक डा. नवराज देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति वनाएको भए पनि उहाँहरु वार्ता गर्न नआएको बताउनुभयो । सो विश्वविद्यालयमा १ वर्ष अघि दैनिक काम काज गर्ने गरि जिम्मेवारी पाउनु भएकी थपलियालेनै उपकुलपतिको काम गर्दै आउनुभएको छ ।
विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष र रजिष्टार पद रिक्त रहेको छ । कृषि र भेटेनरी संकायमा निमित्तको रुपमा उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाउनु भएकी थपलियाले निमित्त डिनहरु नियुक्त गर्नु भएको छ । अधिकांश पदाधिकारी निमित्त भएकाले विश्वविद्यालय पछिल्लो समय अस्थव्यस्थ वनेको हो । रजिष्टार नहुँदा विश्वविद्यालय सभा अझै हुन सकेको छैन ।
रत्ननगरका नगरप्रमुख वनलाई कोरोना सङ्क्रमण
बिश्वकर्मा सम्पमर्क मञ्च द्धारा ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
२०७७, ३० आश्विन शुक्रबार0